Shiinaha Fashion windbreaker / SH-920 warshad iyo shirkado | Xiyingying
Waxyaabaha Dharka: Shell: 100% polyester 75D xusuus been abuur ah; Dahaarka jirka / daboolka: 100% mesh polyester; Dahaarka gacanta: 210T taffeta
Siyaada: Cajalad laastik ah, jiinyeer caag ah
Faallooyin: Daabacaad milicsiga, Daloolka Laser ee dhinaca hore
Dabeecadda dabaysha ayaa taariikh ka badan boqol sano horey u jirtay, haddana waxay umuuqataa inay adkeysan karto waqtiga. Noocyadiisa iyo dharkeeduba waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, oo ka tagi kara aragti qoto dheer oo muuqaal ah; wax qabadkeedu waa mid aan lala barbardhigi karin, qabowga lama filaanka ah iyo deyrta sida lama filaanka ah u kulushahay, dabaylaha dabaylaha ah ayaa la gashan karaa lagana qaadi karaa markuu doono iyadoo aan loo eegin cimilada, wuu kula socon karaa inaad ku safarto meel fog, laakiin sidoo kale wuxuu u xiran karaa jidadka si fudud
Godadka yaryar ee ku yaal dhinaca hore iyo hoodku ma aha oo kaliya inay ka dhigaan kuwo neefsanaya, laakiin sidoo kale waxay ku daraan dareenka moodada. Intaas waxaa sii dheer, midabada casaanka, caddaanka, madow ee isku mid ah had iyo jeer waxay dadka dareemaan inay xaq iyo shar yihiin, nolol iyo geeri, qorax iyo hoos, buuq iyo aamusnaan, xagjir iyo muxaafid. In kasta oo midabadan ay si aad ah uga soo horjeedaan, haddana waxay leeyihiin waxyaabo wadaag ah oo aan la sheegi karin. Isticmaalka isku mar ee midabada is burinaya waa isku dhaf aan la dafiri karin isticmaalka midabada.
Tan iyo markii la aasaasay, waxaan ku adkaysaneynaa fikradda maareynta horumarsan, tayada wax soo saarka aad u fiican iyo hagitaanka shirkadda iyadoo la adeegsanayo fikradda suuqa. Isla mar ahaantaana, waxaan fiiro gaar ah u leenahay qaababka cusub ee horumarinta, raac si adag u xakameynta tayada. Waxaa si qoto dheer u doorbiday macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah inaan siinno tayada heerka koowaad, qiimaha la kala doorbido, keenista waqtiga iyo adeegga tixgelinta iwm. Wax soo saarkeenu waxaa loogu tala galay suuqyada heerka dhexe iyo kuwa sare, oo si fiican aduunka u iibiya, sida Talyaaniga 、 Spain 、 Greece 、 Brazil 、 Filibiin 、 UAE 、 Algeria iyo wixii la mid ah.
Fikraddeena ganacsi ayaa ah in la abuuro soojiidashada isla markaana wadajirka guusha wada-noolaanshaha iskaashi win
Hore: Wiil dabaylaha jebiyey SH-916
Xiga: Jaakada la duubay ee wiilka SH-754
Maaliyada polo ee wiilka M-F373
Jaakada la duubay ee wiilka SH-766
Jaakada la duubay ee wiilka SH-1083
Jaakada la duubay ee wiilka SH-1085
Jaakada la duubay ee wiilka SH-1086
Hoodie wiilkiisa iyo surwaalkiisa SH-985